XOG-Wasiiro katirsan Puntland oo maxkamad looga yeeray kadib markii kiradii guryaha lagu yeeshay
September 17, 2020 Xuseen 6
Xog hoose oo uu helay xafiiska shabakadda PUNTLANDTIMES ayaa sheegaysa in xubno katirsan golaha wasiirada Puntland ay dacweeyeen dad shacab ah oo ku yeeshay lacago 12-kii bilood ee la soo dhaafay.
Xubnahaan oo ka kooban wasiiro iyo wasiir ku-xigeeno katirsan xukuumadda Puntland ayaa waxaa ilo xogagaal ah Puntlandtimes u xaqijiyeen in loo haysto kirada guryo dad shicib ah lahaayeen oo Garoowe ay ka deganaayeen.
Xubnahaan oo katirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo tamarta iyo macdanta ayaa waxaa mulkiilayaasha guryuhu ka dacweeyeen hay’adaha garsoorka Puntland iyadoona looga yeeray maxkamadda derejada 1aad ee gobolka Nugaal.
Dacwoodayaasha qaar ayaa sheegay inay leeyihiin kirada guryohooda muddo 12 bilood ah, waxaana ay sugayaan qaabka ay maxkamaddu maarayn doonto kiisaska noocaan oo ah kuwa madani ah.
Wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa joojisey adeegyadii wasaaraduhu qaadan jireen waxaana ay tallaabadaan u sababaysay dhaqaale xumida kajirta Puntland ee ka dhalatay viruska Corona oo saamayn xoogan ku yeeshay guud ahaan adduunka.
Kiradii guryaha maa lagu yeeshay?!
Sida aan xogta ku hayo, arrinkan waxbaa ka jidha. dadku iskuma jiro, nimanka kirada lagu yeeshay waa siyaasiyiinta aan u aqaanno BARAKACAYAASHA. Waxaaba igu maqaalo ah in qaar hundheeladii cuntada lagu yeeshay oo reer Garoowe ay weelka ku xalaan. Axmed karsshna RIYUHUU reer Garoowe u maalaa baa igu maqaalo ah.
Gunaanadkii, waa halhayskeennii ahaa SSC aniga ayaa iska leh. Waxa aan madaxweynaha qaranka (ee min Lawyacaddo illaa Libooye) ugu baaqayaa in haddii ay ka badin weydo uu heshiiskii Samareeb3 duuduub ugu gudbiyo golaha shacabka si ay uga doodaan una ansixiyaan. Yuusan wakhti dheeri ah ku sii lumin KHAA’INUL WADDAN BASAAS AH. Hoggaamiyaha dhabta ahi waa kan qaata go’aan adag marka ay xaajo dhanaanaato. Wbt
Wàa dhibaato kàle marka biilkà la iska bixin waayo oo la faano,Boowe màa Aniga,cuntad8ina lagu yeesho, war holy kibirka wàa lagu kufaa,tàa ha la ogaado.
Libaax Sanka Taabtay says:
Ina Gaylanoow cadaawaddii aad Puntland u qabtay ma waxaad ku darsaray in aad wasiiradii Reer Mudug iyo reer Sool aad aflagaadaysid? Xaaladdaadu waxay noqotay ”alamtarana soo dhaaf”. Wuxuu xaalkaagu u egtahay nin suunkii uu isku qarxinlahaa dhexda ugu xiran yahay. Waayo ragga aad caayaysid rag daafaca ayey leeyihiin.
WAR WAXAAS WAA CEEB EE MA DADA ISNACAY BAA TIHIIN DOWLADA IYI WASAARDAHA YAAN LOO GAFIN WAAYO WAXAAS WAA CEEBAYN EE HADAL IN XALAAL AH KU HADALO MA HANA MISE WAXAA TIHIIN KUWA LOO DIIDAY IN AY FADLAN QAATAAN 12 NINKA QOF GURIGI KIRO UGU JIRA OO DIIDAY IN UU BIXIYO MA WAXUUSH BAA DADKA MA WAXAAD U QABTAAN WAX AAN WAXBA KALA AQOON JOOJI CAYDA IYO AF LAGAADADA PUNTLAND BALO KMA JIRTO WAA MEEL BARWAAQO AH MARKA ADEER ISKA CAYTAME ASAGAA CAAYOON WAAD ISKU DHEESHAY
Sheeko yaab leh , waana wasiir kiradii gurigana iskama uu bixin…kkkkkkkk
somaliland ma sidoo kale belo war mesha waxba kuma hayaan maamuladu